Soo dejisan Garena+ 2.0.1904.0511 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Garena+
Garena + – software la jecel yahay inuu ka ciyaaro kulan online iyo chat la saaxiibo oo dunida ku baahsan. Software waxaa ka mid ah server ciyaarta la kala qeybinta ay dalka oo awood u ciyaaro kulan ee caanka ah, sida Dota, Counter Strike, League of Halyeeyo, Heroes of Newerth, Call of Duty, L4D, StarCraft iyo kuwo kale. Garena + kuu ogolaanayaa inaad la xiriirto ciyaartoyda kale ee isticmaalaya isgaarsiinta codka, shakhsi ama koox chat. Waxaa jira codsi ah oo si toos ah u Moderator ee server si loo hagaajiyo tayada gameplay. Garena + kuu ogolaanayaa inaad ku hamineysay in dhibcood ku jiraya online u saamaxaya inuu qandaraaska u kordhiyo fursadaha ee xisaabta.
Server kulanka gaarka ah horyaalka by dalka
Support of kulan caansan
Isgaarsiinta Voice, shakhsi ama koox chat
Dhexgalka Facebook iyo Windows Live Messenger
Soo dejisan Garena+
Faallo ku saabsan Garena+
Garena+ Xirfadaha la xiriira